Book Corner | Dr Chit Nge (Philosophy) Ph.D, London
Book Covers, PDF etc… are filed here.
Posted on April 22, 2017 by chitnge
Posted in Book Corner	| Leaveacomment
Posted on August 29, 2014 by chitnge
စာအုပ်အသစ်ထွက်ရှိခြင်း ဗုဒ္ဓစာပေဆုရ စာရေးဆရာကြီး ဒေါက်တာချစ်ငယ်(ဒဿန) ၏ ဝိပဿနာအားထုတ်ရန်အခြေခံအချက်အလက်များ – စာအုပ် မြတ်စာပေမှ ဖြန်ချိလိုက်ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ စာအုပ်ဆိုင်များတွင် ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည်။ တန်ဖိုး = ၂၀၀၀ ကျပ် Admin/ www.chitnge.com No tags for this post.
Posted on May 30, 2013 by chitnge
ပုဂံမြို့ရှိဘုရားများ၌တရားအားထုတ်စဉ်အတွေ့အကြုံများ စာအုပ်အမည် – ပုဂံမြို့ရှိဘုရားများ၌တရားအားထုတ်စဉ်အတွေ့အကြုံများ စာရေးဆရာ – ဒေါက်တာချစ်ငယ် (ဒဿန) စာအုပ်တိုက် – Paing Myanmar Publishing House. ထုတ်ဝေခြင်း – ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဖေဖေါ်ဝါရီလ။ ဖြန့်ချိရေး – တယ်လီဖုန်း – 09 73081913, 09 425373397 မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးရှိ စာအုပ်ဆိုင်များတွင် ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည်။ (Hard Cover, ပုဂံဘုရားများကို စုံလင်စွာ ရောင်စုံဓာတ်ပုံဖြင့် ရိုက်နှိပ်ထားပြီး၊ အထူးခန့်ချုပ်ဖြင့် ထုတ်ဝေထားပါသည်။) Admin (www.chitnge.com) … Continue reading →
Ebook of Ariya Rahandar and Nibbana
Posted on October 27, 2012 by chitnge
ဗုဒ္ဓစာပေဆုရ ဒေါက်တာချစ်ငယ်(ဒဿန) ၏ အရိယာ ရဟန္တာ နိဗ္ဗာန် ဝိပဿနာကျင့်စဉ် ဆွေးနွေးခန်းများ စာအုပ်ကို ebook အဖြစ်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါသည်။ Click on the book below to download – Ariya-Rahandar-Nibbana-Book Tags: Nibbana
Posted in Book Corner, Frontpage	| Tagged Nibbana	| Leaveacomment
စာရေးဆရာကြီး ဒေါက်တာချစ်ငယ် (ဒဿန) ရေးသားထားသော ဇော်ဂျီဖိုဝင်သား စာအုပ်ကို E-Book အနေဖြင့် Download လုပ်ယူနိုင်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း သတင်းကောင်းပါးအပ်ပါသည်။ Admin Click on the book below to download uREkfyfavUvmrdaom aZmf*sDzkd0ifom;ESifU odyÜHynm No tags for this post.
Posted on December 18, 2009 by chitnge
Some of the Dr Chit Nge’s books are available as ebooks. Click on the below link to download. Tags: Buddhism, Myanmar Posts, နိဗ္ဗာန်
Posted in Book Corner	| Tagged Buddhism, Myanmar Posts, နိဗ္ဗာန်	| 1 Comment
စာရေးဆရာ ဒေါက်တာချစ်ငယ်(ဒဿန) ကလောင်အမည်အမျိုးမျိုးဖြင့် ရေးသားထုတ်ဝေခဲ့ပြီးသော စာအုပ်များထဲမှ အချို့ကို ဖော်ပြလိုက်ရပါသည်။ No tags for this post.
Posted in Book Corner	| 1 Comment